Hurumende irikuvaka bhangi remadzimai
Mashoko aAmai Karenyi anotevera mashoko egurukota rinoona nezvemadzimai, Amai Nyasha Chikwinya veZanu PF, avo vakati hurumende ichavhura bhanga rekubatsira vemabhizimusi vechidzimai gore rino risati rapera.
Asi bato re MDC-T rinoti zvese izvi ndezvemanyepo nekuti kana sarudzo dzave kuuya, Zanu-PF inovimbisa zvinhu zvakawanda asi zvichizotsakatika mushure mesarudzo.
“Isusu semadzimai eMDC-T, hatina kumbovhunzwawo pamusoro pechirongwa ichi chekubatsira madzimai,” Amai Karenyi vakaudza Studio 7. “Takambonzwa zvichitaurwa naMinister Chikwinya asi isu hatina kumbovhunzwawo kuti tipe mazano kana phungwa dzedu.”
Amai Karenyi vakuridzira madzimai kuti varwire kodzero dzavo vachiti hurumende haifanire kushandisa mari yeruzhinji rwese rweZimbabwe kuitira vatsigiri vayo zvinhu zvisingaitirwe vamwe vese vemunyika ino.
Hurukuro naAmai Linette Karenyi